Muxuu Kheyre ka raadinayaa Baarlamaanka dalka Kenya?. -
Muxuu Kheyre ka raadinayaa Baarlamaanka dalka Kenya?. –
Kulan Nairobi ku dhexmaray Xasan Cali Khayre iyo Xildhibaanadda Soomaalida ah ee ku jira baarlamaanka Kenya.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne ee Villa Somalia 2020/21 Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay Xildhibaanada Soomaalida ah ee ku jira Baarlamaanka dalka Kenya.
Khayre ayaa ololihiisa doorashada ka bilaabay Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya oo inta badan ay ku sugan yihiin inta badan Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee doonaya in ay u tartamaan kursiga ugu sareeya dalka.
“Waxaan uga mahad celiyay sida wanaagsan ee ay dadka Soomaaliyeed had iyo jeer u garab taagan yihiin” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in uu Horay wadatashiyo dhaxal gal ah la yeeshay madaxwaynaha Dowladda Djibouti oo qeyb wayn ka qaatay welina u taagan dib-u-dhiska dowladnimadeenna Soomaaliya.
Nairobi caasimadda wadanka Kenya waxaa ku sugan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed kuwaas halkaasi ka wada shirar looga hadlayo arimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo in ay dhaqaale u helaan cod-bixinta soo socota ee Soomaaliya.
Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka dhexeeya Khilaaf xooggan oo salka ku haaya muran bada oo haatan yaalla maxkamada Cadaaladda aduunka ee Hague ee caasimadda Netherland.
Maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda adduunka(ICJ), oo uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u gudbiyay dacwad arrintan ku saabsan ayaa laga dhowrayaa in ay soo saarto go’aanka kama dambeysta ah oo ay isha ku hayaan labada dhinac waxaana Kenya ay dadaal ku bixinaysaa in ay Soomaaliya ka soo saarto madaxweyne wada hadal kala galikara arinta badda.
Siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ayaan inta badan ka hadlin xurgufta labada dal, inkastoo ay ku adkeystaan in ay yihiin muwaadiniin haysta dhalashada Kenya hada siyaasiyiinta ku sugan Nairobi waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Daahir Maxamuud Geelle, Cabdikariin Xuseen Guulleed iyo siyaasiyiin kale oo u hanqaltaagaya Villa Somalia.
Chelsea Oo War Rasmi Ah Ka Soo Saartay Haddii Uu N’Golo